फेरि प्रियंका कार्कीले गर्भावस्थाको फोटो हाले पछी आयो यस्तो प्रतिकृया,अब प्रियंकाले के गर्लिन ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
फेरि प्रियंका कार्कीले गर्भावस्थाको फोटो हाले पछी आयो यस्तो प्रतिकृया,अब प्रियंकाले के गर्लिन ?
पछिल्लो समय अभिनेत्री प्रियंका कार्की सामाजिक सञ्जालमा एकदमै छाउने गरेकी छिन् । उनी अहिले ग,र्भअवस्थामा छिन् । उनको एउटा न एउटा फोटोले सामाजिक सञ्जाल त,ताई नै रहेको छ । धेरै फोटो हालेको त्यो पनि ग,र्भवती अवस्थामा भनेर धेरैले उनको ट्रो,ल समेत बनाउँदै आएका छन् । तर यी सबै कुराका बाबजुद पनि उनी आफ्नो मस्तीमा तल्लीन नै रहेकी छिन् ।
श्रीमान् तथा अभिनेता आयुषमान देशराजले बेबी सावर गरिदिएको त्यस लगत्तै उनले आफ्नो साथीहरु संग रमाईलो गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेपछि सामाजिक संजालम निकै तात्न पुग्यो । ए लफ्ट होटललाई धन्यवाद दिँदै उनले आफ्ना साथीहरु संग मस्ती गरिरहेको तस्वीर अपलोड गरेकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन् मेरा फेब केटीहरुसंग सधै एउटा समय । उनका यी तस्बिरले निकै चर्चा पायो भने एउट छुट्टै बहस पनि श्रृजना गर्यो । यसै क्रममा उनको पछिल्लो तस्बिरले पनि निकै चर्चा पाएको छ ।
काठमाडौं । नक्कली कागजातसहित अमेरिका जाने क्रममा जर्मनीको फ्र्यांकफोर्ट विमानस्थल समातिने नेपालीको संख्या ८५...
मलेशियाले ३२,००० विदेशी कामदारहरु ल्याउने नेपालीको लागि के छ ?